Kooxda Bayern Munich oo dib u soo cusbooneysiisay doonista Weeraryahanka Manchester City ee Leroy Sane – Gool FM
Haaruun November 14, 2019
(Munich) 14 Nof 2019. Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay dib u soo celinayso haatan xiisihii Weeraryahanka 90-ka milyan oo gini lagu qiimeeyo ee kooxda Manchester City, Leroy Sane ka hor suuqa kala iibsiga xagaaga soo socda.
Kooxda haysata horyaalnimada Bundesliga ayaa la kulantay wakiillo ka socda City xagaagii si ay ugala xaajoodaan suurto-galnimada ay heshiis ugula soo wareegi karaan garabka reer Jarmal, kaasoo lagu qiimeeyo 90 milyan oo gini.
Kaddib dhaawacii Sane ee jilibka ka soo gaaray bishii Agoosto ayaa ka dhigaya in weeraryahanka kooxda Manchester City garoomada ka maqnaado illaa 2020, ayaa la micno ah in xiisaha Bayern ay ka baxday.
Isagoo la hadlayay la hadlayey The Mirror, xubin ka tirsan guddiga Bayern oo ah Edmund Stoiber ayaa yiri: “Waxaa jiray wadahadalo ku saabsan Sane.
“Waxaan arki doonaa sida ay wax u socdaan, anigoo ah guddoomiyaha guddiga latalinta, islamarkaana xubin ka ah guddiga kormeerka, waxaan kalsooni weyn ku qabaa hoggaaminta isboortiga.”
Kooxda Bundesliga ka dhisan ayaa diyaar u ah inay Sane heshiis ka saxiixato iyadoo aragta 23-sano jirkaan inuu sanadkii kaliya qaadanayo 20 milyan oo gini.
Dhinaca kale Manchester City ayaa ka shaqeynaysa sidii ay heshiis cusub uga saxiixan lahayd Sane, kaasoo heshiiskiisa haatan uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda.